Omunye ebuhlungu ukukhulelwa kuhlulekile ethuthuka ukhulelwe, ibizwa nangokuthi njengezigqila ezingewona ama-iphila. Lokhu sokukhulelwa kuhilela ukufa fetus, okuyinto ngokuvamile kwenzeka lapho kusaqalwa, ngesikhathi senyanga yokuqala, kodwa abukho ubufakazi obucacile lokhu. Okungukuthi, kwesisu, ngoba noma ngabe yisiphi isizathu, akazange athathe indawo.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: nezimbangela zayo.
Okwamanje, izazi Awukwazi ukuphendula ngokunembile umbuzo wokuthi kungani kwakungasalanga ekuthuthukiseni sokukhulelwa, izizathu kunzima ucacise. Kunezici eziningi ezithinta i-fetus ngesikhathi sokukhulelwa. Abakwazi ukuthi wonke umuntu abe nomthelela omubi ukuthuthukiswa noma imbangela yokufa. Ngakho-ke, kulesi simo, kudingeka isikhathi ukuze uthole isisu ezingabanjwanga, ngoba kungadala izinkinga ezinkulu zempilo yowesifazane.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: kubangela ezithathelwanayo.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa e yomzimba wowesifazane egcina izinguquko eziphawulekayo hormone, ukuze bakwazi isebenze yilabo izifo musa ubonise ngokwabo endaweni evamile. Noma yimuphi ukutheleleka igciwane noma kuphazamise ukukhula komntwana ongakazalwa, futhi kwezinye izimo ziholele ekufeni fetus. Ngokwesibonelo, abameleli ezivelele ingozi ukuze izifo umbungu kukhona igciwane rubella, Staphylococcus futhi Streptococcus, kanye herpes. Lesifo angawuthinta umbungu ngqo, ngokwenza ngokusebenzisa amniotic fluid noma umzanyana liphazamisane nomsebenzi, okuyinto sizothinta ukuthuthukiswa somntwana ongakazalwa.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: esesimisweni somzimba sokuzivikela futhi izakhi zofuzo ezibangela.
Kunezikhathi lapho ingane ziqondakala umbungu njengoba nomzimba angaphandle emzimbeni futhi akhiqiza amasosha omzimba ngokumelene nalo, okuyizinto ezibangela ukufa umbungu. Ezimweni eziningi, lokhu mkhuba akashadile futhi akuphazamisi sokukhulelwa olandelayo.
By izakhi zofuzo ezibangela asathuthuka sokukhulelwa zihlanganisa chromosomal neziyaluyalu thrombotic. Ngokuvamile chromosome anomaly kwenzeka kwabesifazane asebekhulile, njengoba ne minyaka zokuphila umthelela imvelo okungekuhle namandla. Njengoba kwanda abesifazane yobudala izinga kwemvelo, okuholela umzimba wakhe kuyehla, ngakho-ke inani normal embryonic ukuthuthukiswa iyakhula. Zivimbela ukukhula umbungu kungenzeka yezinkinga thrombotic, okungukuthi, ukushayisana kwe inhlangano igazi ekunqandeni, okwenzeka ezakhini zofuzo. Uma kwezisu okungamashumi liphindwe izikhathi eziningana, bese sikwazi ukukhuluma translocation inzuzo. Ngakuthola ngempela ezingavamile 2-10%.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: izimbangela hormone.
ukufa fetus singenzeka ngenxa ukuphazamiseka ohlelweni endocrine, kuphumele ophuzi imisebenzi umzimba ukubambezela. Insikazi umthondo uhlelo kwenzeka disorder kwegazi, kanjalo uvimbele kunyatheliswa i-fetus, okuyinto nakanjani kuholela ekufeni. Ngokuvamile, izinkinga ezifana abesifazane nazo emzimbeni lapho kukhona ama-hormone wesilisa.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: izimpawu.
Okuvela non-iphila sokukhulelwa ekuqaleni kungenzeka zihambisane izimpawu. Ngezinye izikhathi khona yawo lubonisa olokugobhoza ngokubomvu, stop ngokuzumayo ubuthi. Owesifazane angase ukuzwa ubuhlungu okungazelelwe esiswini, kwehle webele ukuzwela kanye nezinga lokushisa lomzimba basal. A uphawu ku eside ngasekupheleni bangase bangabe encane wiggling.
Nokho, uphethwe esichazayo ungenziwa kuphela uqoke uchwepheshe, ngakho ukuthola yezimpawu zesifo esithile akufanele ahlukumeze izinsolo. Kufanele ngokushesha kudokotela futhi imise-ultrasound.
Iningi izimpushana wokuwasha: ukubuyekezwa, survey. insipho-Korean: umbono